BQ waxay cusbooneysiineysaa kala duwanaanta U illaa Android 7.1.1. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan iyo sida loo wado | Androidsis
BQ waxay cusbooneysiineysaa kala duwanaanta U illaa Android 7.1.1. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan iyo sida loo wado
Shaki kuma jiro in BQ laga yaabo inuu yahay midka ugu caansan Isbaanishka tiknoolajiyadda moobiilka qaran ahaan iyo caalami ahaanba. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah tan waxaa ugu wacan siyaasaddeeda cusbooneysiinta ee aad u wanaagsan ee loo yaqaan 'Android terminals', sida ku cad kiiskan meesha BQ Aquaris U kala duwani wuxuu heli doonaa cusbooneysiinta muddada dheer la sugayay iyada oo loo marayo OTA illaa Android Nougat ama Android 7.1.1 hadda!.
Hawlgalkan cusbooneysiinta la filayo ee loo yaqaan 'Android Nougat 7.1.1' wuxuu bilaabmayaa isla maanta isla maalintaas 'BQ Aquaris U Plus', oo ah hawlgal la filayo in la qabto isla habeenkan subaxa hore ee dhulka Isbaanishka. Maalmaha soo socda ayaa cusbooneysiinta OTA waxaa loo soo saari doonaa moodooyinka soo socda ee BQ U:
1 Tani waa dejinta cusbooneysiinta OTA ee Android 7.1.1 ee loogu talagalay BQ U
2 Sideen ugu cusbooneysiiyaa cusbooneysiinta OTA illaa Android 7.1.1 Nougat?
2.1 Ku xidhnow shabakad Wi-Fi ah oo leh terminaalka lagu rakibo 100 × 100 oo sabir
Tani waa dejinta cusbooneysiinta OTA ee Android 7.1.1 ee loogu talagalay BQ U
Maanta waxaa soo saarista horumarka ah ee cusbooneysiinta OTA illaa Android 7.1.1 loogu talagalay BQ Aquaris U Plus, geyn sida aan idhi waxaa lagu samayn doonaa qaab jaahwareer ah oo horumar leh moodooyinkaan boosteejooyinka BQ, markaa ha quusan tan iyo maanta ama ugu badnaan subaxnimadan waa inaad heshaa ogeysiiska la filayo ee cusbooneysiinta nidaamka cusub ee diyaar u ah soo dejinta.
Waxay noqon doontaa maalinta berri marka BQ Aquaris U Lite ay helaan qiyaasta nougat ee ay sugayeen muddada dheer iyada oo loo marayo cusbooneysiintan iyada oo loo marayo OTA illaa Android 7.1.1, oo ah cusbooneysiin rasmi ah oo Android ah oo ay iyagu awoodaan. Muuji boosteejooyinka Google sida Google Pixel ama kuwa ku iftiimiyay xaruntooda Rom LinageOS 14.1.
Marka laga hadlayo moodooyinka BQ Aquaris U waxay noqon doonaan laga bilaabo maalinta xigta berri markii ay ku helaan isla cusbooneysiintan isla OTA illaa Android Nougat 7.1.1, oo si ku habboon loogu habboonaado tilmaamaha farsamo iyo qalab ee gundhiggooda Android.
Sideen ugu cusbooneysiiyaa cusbooneysiinta OTA illaa Android 7.1.1 Nougat?
Si aad u dalbato cusbooneysiintan cusub ee loo maro OTA illaa Android 7.1.1 waa inaadan waxba qaban, gabi ahaanba jooji gelitaanka goobahaaga Android, qalabka ku saabsan oo arag haddii ay jiraan nidaamyo cusub oo cusbooneysiinaya illaa iyo sida ugu dhakhsaha badan ee OTA ee loo heli karo qaabkaaga terminal loo soo bandhigo, waxaad heli doontaa ogeysiin otomaatig ah ku ogeysiinaya noocaan cusub ee Android ah ee la heli karo.
Kaliya waa inaad ka walwashaa inaad haysato meel aad ku keydiso oo kugu filan, in ka badan ama ka yar waxaad u baahan doontaa inaad nadiifiso ama waxay leeyihiin xusuusta keydka ugu yaraan 4 Gb oo ah meel disk la isticmaali karo.
Ku xidhnow shabakad Wi-Fi ah oo leh terminaalka lagu rakibo 100 × 100 oo sabir
Maskaxda ku hay in soo degsashada cusbooneysiinta OTA ee Android 7.1.1 Nougat ay waxyar sii dheeraan karto culeyska feylasha loo baahan yahay ee cusbooneysiinta nidaamka, sidaas darteed Waxaan kugula talineynaa inaad gujiso ogeysiiska cusbooneysiinta OTA ee la heli karo markii aad ku xiran tahay shabakadda Wi-Fi iyo doorbid ahaan marka aad si buuxda u rakibtay terminal-ka. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad cusbooneysiiso habeenkii markaan badanaa ku xirno terminaalkeena xeedho asalka ah si aan uga qaadno.
Sidoo kale inta lagu guda jiro fulinta cusbooneysiinta OTA ee loogu talagalay Android 7.1.1 Nougat, taas oo ah, markii OTA la soo dejiyo iyo habka cusbooneysiinta ee qaabkan cusub ee ugu dambeeyay ee Android uu bilaabay, boosteejadaada ayaa dib u bilaabi doonta qaabka adeegga ama Soo dejinta qaabka si loo fuliyo cusbooneysiinta rasmiga ah ee aan soo sheegnay, inta lagu jiro daqiiqadahan, in yar 30 daqiiqo qiyaastiiMa awoodi doontid inaad isticmaasho terminaalkaaga oo si otomaatig ah ayuu dib ugu bilaabi doonaa ugu yaraan dhowr jeer, dhamaadka wax walbana, wuxuu ku tusi doonaa calaamadda BQ iyo shaashadda guriga marka hal mar cusbooneysiinta rasmiga ah ee Android 7.1.1 si buuxda loo buuxiyo .mid.
Tallaabada ugu dambeysa waxay noqon doontaa in la hagaajiyo codsiyada lagu rakibay BQ Aquaris U. Tan dambe sidoo kale waxay kugu qaadan kartaa waqti dheer iyadoo kuxiran tirada codsiyada aad ku rakibtay BQ-gaaga..
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » BQ waxay cusbooneysiineysaa kala duwanaanta U illaa Android 7.1.1. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan iyo sida loo wado
Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus, sidoo kale waa calanka cusub ee soo saaraha
ZTE wuxuu qirayaa "Khaladaadka aan sameynay" Taleefanada oo aan siino Iran iyo Kuuriyada Woqooyi iyadoo lagu xadgudbayo xayiraadaha Mareykanka.